Iindaba - Umahluko phakathi kweswetha kunye neswetha
Ngokwesiqhelo ijezi luhlobo lwejezi enithiweyo. I-Knitwear ingumbono obanzi. Izambatho ezinokwahlulwahlulwahlulwa zibe zezomqhaphu kunye nezolukiweyo, kwaye ijezi zezempahla ezinithiweyo. Ijezi ezinithiweyo sidla ngokubhekisa kuzo ngokubanzi zibhekisa kumalaphu alukiweyo ngezixhobo zokunitha. Umphezulu uyinyani yentaba kunye noboya obelukiweyo ngokweendlela zokulungisa azifani, umqhaphu onithiweyo ijezi kwimveliso yokusika kunye nokuthunga itekhnoloji. Iwulu enithiweyo ijezi ayenzi. Eli laphu ezinithiweyo ngokusebenzisa idisk. Ijezi esihlala sithetha ngazo ikakhulu ziingubo ezinithi zenziwe ngomsonto woboya, kwaye iijezi ezinithiweyo ziyingcamango yobungcali. Ngokubanzi, iimpahla zangaphantsi, ezomqhaphu ezemidlalo, iikawusi, njl njl zinokuthathwa njengokunitha.
I-Knitwear ihlala isityebi kwi-drape kunye nefuthe lomzimba. Kwiminyaka yakutshanje, umxube we-cardigan odibeneyo kunye nomdlalo ulungele kakhulu amantombazana amancinci. Khetha ijezi enemibala eqinileyo enxibe ilokhwe emfutshane kunye neelekese ezinemibala yeebhlukhwe ngeebhutsi zikaMartin. Ilokhwe entle kakhulu, isondo lengubo akufuneki lide kakhulu. Kwimozulu ebandayo, lukhetho olufanelekileyo ukukhetha isihlangu sekhephu esijijekileyo. Le ndibaniselwano inemfashini, intsha, inomdla kwaye intle.
Imvakalelo evakalala kunye nokungaqhelekanga kweejezi ezinithiweyo, njengengubo, inokubonisa kakuhle isitayile saseYurophu nesaseMelika. Ukuba unxibe umphezulu omncinci ofanelekileyo, ii-denim ezimfutshane ezifanayo ziya kongeza ukungxama. Izitokhwe ezimdaka ngebala kunye nebhatyi enithiweyo enesiketi zikwenza ubonakale umhle kwaye ugcwele umtsalane. Iziphumo ezisondeleyo zokunxiba zinokwenza amabele kunye neenyonga zibukeke zigcwele, ngelixa isitokhwe esimnyama silula nje kwaye sinciphise imigca yemilenze yakho. Umtsalane wabasetyhini ubonakalisiwe kakhulu. Ukuba unxibe idyasi enithiweyo, awulungelanga kakhulu i-snood enzima. Ngoku isikhafu esincinci isikhafu sibotshelelwe entanyeni, enefashoni kunye nesisa.